The Centre for Development and Ethnic Studies (CDES) is hosting Saturday School of Federalism (Batch-15) at the CDES office starting from 8 February 2020.
The program “Saturday School of Federalism” aims to advance the peace and reconciliation process by intensifying the practices of democracy, federalism, gender equality, and human rights, as well as to initiate and become an independent program or institution in the future that provides reliable and credible knowledge on federalism.
The total participants are 26 (male – 12, female – 16) from different universities, civil society organizations, and NGOs. The program “Saturday School of Federalism (Batch-15)” will end on 29 February 2020.
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးသုတေသနအသင်း (CDES) က အဓိကဦးစားပေး လုပ်ဆောင် နေသောလုပ်ငန်းများထဲမှ တခုဖြစ်သည့် Saturday School of Federalism သင်တန်းကို (၁၅) ကြိမ်မြောက်အနေနှင့် CDES ရုံးမှာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေပါသည်။
ယင်းသင်တန်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အဓိကသင်ကြားမှုများအနေနှင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး အတွက် လိုအပ်သော နိုင်ငံရေး လက္ခဏာများ၊ ဖက်ဒရယ် အင်္ဂါရပ်များစသည့် အချက်များကို အခြေခံသဘောတရားများ နားလည်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သင်ကြားပေးနေသော သင်တန်း ဖြစ်သည်။
ယင်းသင်တန်းတွင် သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသား စုစုပေါင်း ၂၆ (ကျား - ၁၂၊ မ - ၁၄) ဦး တက်ရောက်နေပြီး ဖေေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ၁၅ ကြိမ်မြောက်ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းပြီးဆုံးမည် ဖြစ်သည်။